Yehowa Adansefo wɔ Estonia: “Nea Aba Kɔ No Wosesa No A Ɛnyɛ Yiye”
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
June 14, 2007 no, Estonia Posɔfese mpanyimfo twaa setampo bi a wɔde yɛɛ nkae, na ɛno na ɛwɔ nifa so ha no. Bere a wɔde setampo no rekyerɛ ɔmanfo no wɔkae sɛ: “Wɔayɛ setampo yi sɛ wɔmfa nkae Estoniafo a Stalin bere so wokunkum wɔn no.” Afe 1941 ne afe 1951 ntam hɔ no, wotwaa Estoniafo mpempem pii asu fii wɔn kurom.
“NEA aba kɔ no wosesa no a ɛnyɛ yiye.” Eyi yɛ asɛm a wɔtaa ka wɔ Estonia, na aman foforo nso wɔ nsɛm bi te sɛ eyi a wɔka. Ɛyɛ nokware, yɛrentumi nsesa nea aba kɔ, nanso yebetumi asua biribi afi mu. Tete Israel hene nyansafo Solomon kae sɛ: “Eyi nyinaa mahu, na mede me koma adi adwuma biara a wɔyɛ owia ase no akyi; ɛbere no mu na onipa di onipa so ma ewie no bɔne.”—Ɔsɛnkafo 8:9.
Mfe pii a atwam no, biribi sii wɔ Estonia ne Europe Apuei fam mmeae pii a esii so dua sɛ Bible mu asɛm yi yɛ nokware. Nnipa nniso de amanehunu bebree brɛɛ ɔmanfo a wɔn ho nni asɛm; wɔsoaa wɔn mu bi koguu akyirikyiri baabi na wɔde ebinom nso koguu nneduaban mu.
Abakɔsɛm akyerɛwfo a wɔwɔ ɔman no mu kyerɛ sɛ afe 1941 ne 1951 ntam no, wotwaa nnipa bɛboro 46,000 asu fii saa ɔman ketewa no mu. Nnipa no bi wɔ hɔ a, amanyɔkuw a wɔdɔm na ɛma wotuu wɔn ani sii wɔn so, na ebinom nso de, ɔman a wofi mu ne wɔn gyinabea wɔ asetena mu ntia. Yehowa Adansefo de, wɔn som nti na wɔtan wɔn.
Wotuu Wɔn Ani Sii Nyamesurofo So
Tartu Sukuupɔn no yɛɛ nhwehwɛmu bi wɔ afe 2004 mu, na abakɔsɛm kyerɛwfo Aigi Rahi-Tamm kae wɔ ɛho kyerɛwtohɔ mu sɛ: “Efi 1948 kosi 1951 no, wɔkyeree Yehowa Adansefo ne wɔn nnamfonom 72. Nanso nea ɛwom ne sɛ, nhyehyɛe a wɔyɛe sɛ wontwa Adansefo no asu April 1, 1951 anadwo no, ɛnyɛ Baltic States nkurow nkutoo so na na wɔreyɛ wɔn saa, na mmom na ɛrekɔ so wɔ Moldova ne Ukraine atɔe fam ne Belorussia nyinaa.”
Ansa na 1951 reba no, wodii Yehowa Adansefo ani wɔ Estonia sɛ! Wɔkyeree wɔn mu binom bisabisaa wɔn nsɛm, hunahunaa wɔn, na wɔde ebinom guu afiase. Nanso saa bere yi de, na wɔpɛ sɛ wotu Yehowa Adansefo ase koraa fi Estonia.
Wɔakyerɛw April 1, 1951 agu setampo no so. Wɔakyerɛw 382 nso agu setampo no so, na ɛno kyerɛ Yehowa Adansefo ne wɔn mma dodow a wotwaa wɔn asu saa da no ne Adansefo no abusuafo ne wɔn nnamfo a wɔde wɔn kaa ho kɔe. Saa da no, wɔkɔkyeree Adansefo a na wɔwɔ ɔman no mu baabiara, na anadwo no, nnipa a wɔkyeree wɔn no, mpanyin ne mmofra nyinaa, wɔde wɔn guu keteke mu baabi a wɔde mmoa gu de wɔn ani kyerɛɛ Siberia.
Ella Toom * yɛ Yehowa Dansefo, na saa bere no, na wadi mfe 25. Ɔkaa ɔkwan a na wɔfa so bisabisa wɔn nsɛm no ho asɛm sɛ: “Aban nipa bi hunahunaa me sɛ minnyae asɛnka adwuma no. Bere bi obisaa me sɛ: ‘Wopɛ sɛ wotena nkwa mu? Anaasɛ wopɛ sɛ wo ne wo Nyankopɔn no nyinaa kowu wɔ Siberia sare so?’” Nanso Ella de akokoduru toaa so kaa asɛmpa no. Wɔde no kɔɔ Siberia, na bɛyɛ mfe asia de, nneduaban mu nko ara; wɔde no fi ha a na wɔde no kɔ ha.
Ná Hiisi Lember yɛ Ɔdansefo ababaa bi a ɔka nnipa bebree a wotwaa wɔn asu yayaayaw no ho. Ɔkaa nsɛm a esisii April 1, 1951 no ho asɛm sɛ: “Wɔbaa yɛn so mpofirim anadwo, na wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ: ‘Yɛama mo simma aduasa sɛ momfa mmoaboa mo nneɛma ano!’” Wɔde Hiisi ne ne babea a na wadi mfe asia kɔɔ keteke gyinabea hɔ anadwo a obiara anhu. Keteke nkyɛnkyɛmma no tu kɔɔ mmeaemmeae kɔsesaw Adansefo pii kaa ho. “Wɔsoaa yɛn guu keteke no mu baabi a wɔde mmoa gu. Nea eye ne sɛ na awɔw ama mmoa bin no akyenkyen, anyɛ saa a, anka ɛbɛyɛ den sɛ yebegyina mu. Wɔyɛɛ yɛn sɛ mmoa a wogu adaka mu.”
Wɔtenaa keteke no mu nnawɔtwe abien, na wɔn amanehunu de, yɛnka. Nnipa a wɔde wɔn guu baabi a wɔde mmoa gu no, na wɔdɔɔso boro so, na na emu nso yɛ tan. Animguase de, mpanyin ne mmofra nyinaa faa no kwa. Ebinom sui, na wɔannidi mpo. Ne nyinaa akyi no, Adansefo no too dwom de hyehyɛɛ wɔn ho nkuran, na wonya aduan nso a na wɔma wɔn nuanom bi di. Wɔde wɔn kɔɔ baabi sɛ wɔnkɔtena hɔ, na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔaka hɔ.
Hiisi Lember ne ne babea, Maaja
Hiisi kae sɛ anuanom boaa no paa, na ɛkaa ne koma. Ɔkae sɛ: “Yeduu baabi no, keteke a yɛte mu no gyinaa keteke foforo a efi Moldova ho. Ɔbarima bi a ɔwɔ saa keteke no mu bisae sɛ yɛyɛ nnipa bɛn na ɛhe na yɛrekɔ. Yɛka kyerɛɛ no sɛ yɛyɛ Yehowa Adansefo a yefi Estonia, na yennim baabi a wɔde yɛn rekɔ. Yɛn nuanom Adansefo a wɔwɔ saa keteke no mu a wofi Moldova tee nea yɛkae no, na wɔtow paanoo kɛse bi ne n’akade faa tokuru bi mu maa yɛn.” Ɔtoaa so sɛ: “Ɛno ma yehui sɛ wɔakɔkyere Yehowa Adansefo afi mmeae pii wɔ Soviet Union nyinaa!”
Adansefo mmeawa baanu bi a wɔfrɛ wɔn Corinna ne Ene de, bɛboro mfe asia, na wonhuu wɔn maame da. Ná wɔn maame nso yɛ Yehowa Dansefo, na na wɔadi kan akyere no de no kɔ nneduaban mu. Afei saa April da bɔne no, wɔbɛkyeree mmeawa baanu no nso fii fie twee wɔn koguu keteke a wɔde twe mmoa mu. Corinna de anigye kae sɛ: “Bere a yɛwɔ keteke no mu no, Ɔdansefo bi a ne mma yɛ baanu kae sɛ ɔbɛhwɛ yɛn. Onuawa no kaa yɛn koma too yɛn yam sɛ ɔde yɛn bɛka ne mma no ho na yɛatena sɛ abusua biako.”
Bere a woduu baabi a wɔde wɔn rekɔ no, dɛn na esii? Da a wokoduu Siberia kwayow so awɔw no mu no, n’adekyee na animguasesɛm bi sii; wofii ase kyɛɛ nnipa no fae. Nkurɔfo fi mfuw a ɛbemmɛn hɔ mu baa hɔ bɛpɛɛ nnipa a wɔde wɔn bɛyɛ adwuma wɔ wɔn mfuw mu. Corinna kae sɛ: “Yɛtee sɛ ebinom reko yɛn ho sɛ: ‘Na sɛ woanya obi a ɔka wo trata dedaw. Ma me nso memfa oyi,’ na biako nso kae sɛ, ‘Manya nkwakoraa ne mmerewa no bi dedaw, enti wo nso fa bi.’”
Ene ne ne nuabea, Corinna
Ná Corinna ne Ene wɔ akokoduru paa. Akyiri yi wɔkae sɛ: “Yɛn ani gyinaa yɛn maame sɛ! Ná yɛn kɔn dɔ sɛ yɛbɛsan ayɛ no atuu bio!” Nea ɛtoo wɔn nyinaa akyi no, wɔannyae wɔn gyidi mu na wɔde bi yɛɛ serew. Corinna kae sɛ: “Ɔkwan bi so no, na eye mpo sɛ yɛn maame anhu yɛn, efisɛ ɛtɔ da bi a, na yegyina awɔw a ano yɛ den mu yɛ adwuma a yɛnhyɛ ntade papa biara.”
Anokwa, nnipa a wɔnyɛɛ bɔne biara huu amane nkurɔfo nsa ano wɔ Estonia ne aman foforo so, na Yehowa Adansefo nso ahu amane bi. (Hwɛ adaka a wɔato din “‘Aninyanne’ a Enni Ano.”) Aninyanne a bere bi wɔde dii Yehowa Adansefo wɔ Estonia nyinaa akyi no, wogu so denneennen wɔ hɔ, na wɔn ani gye.
Daakye Papa Bi Da Yɛn Anim
Bible ma yɛte ase sɛ Yehowa Nyankopɔn kyi nsisi. Ɛka sɛ: “Yehowa wo Nyankopɔn kyi obiara a ɔyɛ saa, obiara a osisi afoforo biara.” (Deuteronomium 25:16) Ɛwom, Onyankopɔn ama amumɔyɛ ho kwan, nanso ɛrenkyɛ obeyi nsisi ne amumɔyɛ afi hɔ. Odwontofo no kae sɛ: “Aka kakraa bi na ɔdebɔneyɛfo nni hɔ bio; na wohwehwɛ ne tenabea a, na onni hɔ. Na ahobrɛasefo benya asase no adi, na wɔagye wɔn ani asomdwoe bebree mu.”—Dwom 37:10, 11.
Ampa, daakye papa bi da hɔ retwɛn yɛn! Ɛwom, yɛrentumi nsesa nea aba kɔ no, nanso yɛn daakye de, yebetumi ayɛ ho biribi. Sɛ wobɛn Onyankopɔn a, daakye wo nso wubetumi atena wiase a trenee te mu no mu.—Yesaia 11:9.
^ nky. 10 Wɔde Ella Toom asetenam nsɛm baa Nyan! mu. Ɛwɔ Borɔfo de a ɛbaa April 2006 no kratafa 20-24.
“Aninyanne” a Enni Ano
“Aninyanne a ɛkɔɔ so wɔ ɔman no nyinaa mu no, . . . wohwɛ a ɛnhwɛ . . . ; wɔmaa nnipa ɔpepem pii abrabɔ yɛɛ basaa. Wɔanni ebinom asɛm na wokunkum wɔn, wotwaa ebinom asu de wɔn kɔɔ nneduaban mu, na ebinom nso, wɔde wɔn kyɛfa kamee wɔn esiane adwuma a wɔyɛ ne kuw a wɔdɔm nti. . . . Dwen asɛm yi ho hwɛ: Yɛsee yɛsee ne atoro a wotwa too nkurɔfo so nti, nnipa ɔpepem pii hweree wɔn nkwa.”—RUSSIA MAMPANYIN MEDVEDEV, OCTOBER 30, 2009.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN December 2012 | Biribi a Ɛkyɛn Buronya